Published June 19, 2020 at 8:16 PM CDT
Intii lagu gudajiray shir jaraa'id subaxnimadii Khamiista, gudoomiyaha gobolka Kim Reynold wuxuu sheegay in diirada ay haatan saaran tahay soo kabashada gobolka kadib masiibadii COVID-19.
Waxay ku dhawaaqday Guddi La-talin Soo-kabasho oo Cusub.
Kooxda waxaa ku jira hoggaamiyeyaasha ganacsiga dhammaan afarta gees ee gobolka, oo ay ku jiraan xubin Rugta Ganacsiga Siouxland.
Cisbitaalada isbitaallada COVID-19 ayaa hoos u dhacayay toddobaadyo. Laakiin meelaha qaar ee gobolka ayaa hadda bilaabaya inay arkaan miiqyo ay ka mid yihiin gobollada Dickinson iyo Buena Vista ee waqooyi-galbeed Iowa. Reynolds wuxuu leeyahay seddex goobood oo cusub Iowa ayaa furmi doona usbuuca soo socda, oo ay kujirto mid ka mid ah Lake Lake ee Dickinson County.
Maxakamadda sare ayaa xukuntay maanta in maamulka Trump uu si dhakhso ah usii wadi karin qorshooyinka lagu joojinayo barnaamij ka ilaaliya dhalinyarada soogalootiga ah ee loo yaqaan "riyooyinka" masaafurinta. Waxaa jira qiyaastii 700 boqol-kun DACA, ama Tallaabada loo diro Tallaalka Carruurnimada ee Imaatinka deggan Mareykanka.
Andrea Paret waa wakiilka loo aqoonsan yahay wakiilka shahaadada laga qaatay ee Mary Treglia House House ee Magaalada Sioux City. Waxay siisaa caawimaad sharciyeed muhaajiriinta. Paret wuxuu leeyahay xukunka maxkamadda sare ma ahan xalka joogtada ah kaliya wuxuu u ogolaanayaa cusboonaysiinta inay sii socdaan.
Waxaa jira ku dhawaad 25 boqol oo DACA “Riyo-yare” Iowa.
Warbixinta Horumarinta Shaqaalaha ee Iowa ayaa in ka badan 9.500 oo shaqaale ah waxay gudbiyeen sheegashooyin shaqo la'aan cusub usbuucii hore. Taasi waxay la mid tahay tii toddobaadkii hore.
Sheegashooyinka badankood waxay ka yimaadeen warshadaha wax soo saarka iyo shaqaalaha iskood u shaqaysta.
Tirada guud ee dadka reer Iowan ee kasbanaya qaadashada faa'idooyinka shaqo la'aanta ayaa hoos uga dhacday illaa 155,000. Taasi waxay hoos uga dhacday ugu badnaan 190,000 horraantii Maajo.
Local NewsLocalIowaNebraskaSouth DakotaMary J. Treglia Community HouseWinnebagoIowa Governor Kim ReynoldsDACAnewsIowa Workforce DevelopmentunemploymentCOVID-19SomaliTestIowaAndrea ParetDreamers
Hal qof oo dheeri ah ayaa ku dhintey aagga metrooga ee magaalada'ioioio 'sababo la xiriira dhibaatooyinka ka dhashey COVID-19. Si kastaba ha noqotee,…
Saraakiisha caafimaadka ee Gobolka Dakota ayaa soo weriyey in hal qof oo dheeri ah u dhintey dhibaatooyin la xiriira COVID-19 oo ah 32 geeri. Mar labaad,…
Labo degmo oo ka tirsan waqooyiga-galbeed ee Iowa midkiiba wuxuu soo sheegaa laba dhimasho oo dheeri ah sababtuna tahay COVID-19 24-kii saac ee la soo…
Waaxyada caafimaadka ee magaalada 'Sioux City metro' waxay soo sheegaan kiisas aad u yar oo ah COVID-19 Arbacadan.Ma jirin wax dhimasho ah. Wadarta guud…